Ny Rhododendron na rosewood dia iray amin'ireo zavamaniry malaza indrindra eran-tany. Ny fitiavam-pitiavana an'io zavamaniry io dia nandresy noho ny endrika ivelany sy mampitolagaga. Mahasarika indrindra ny lohataona, rehefa rakotra rongony fotsy fotsy, mavokely, volomparasy, volomparasy mena na mena mena ireo ravin-damosin'ny rhododendron. Ny lamaody ho an'ireo lehilahy tsara tarehy sy ireo latabatra ireo dia tsy nivalozana: mihoatra ny 100 karazana rhododendrons dia ampiasaina amin'ny fikarakarana zaridaina, izay misy ny hybrida maro dia maro, samy hafa amin'ny endrika sy ny haben'ny ravina sy voninkazo. Misy karazan-javamaniry matevina sy marefo, ary ny fomba fiakaran'ny rhododendron hibernates, voalohany indrindra, amin'ny karazany.
Ahoana no hanomanana rhododendron amin'ny ririnina?
Ny dingana voalohany amin'ny fanomanana ny Rhododendron amin'ny ririnina dia ny famaritana mazava tsara ny karazany. Ny zava-misy dia, na dia eo aza ny fiheverana fa maro ireo karazam-bolo ireo dia mahavelona, ​​maro karazana rhododendrons mora mahatanty ny hafanana midina -30 ° C tsy misy fialofana. Ary ity no tandindomin-doza izay miavaka amin'ny voninkazo marefo, ary ny zavamaniry dia mora am-pandeferana na dia mangatsiaka mafy kokoa aza. Nefa ny zavamaniry tanora roa taona aorian'ny fambolena dia soso-kevitra ny handrakotra ny ririnina, na inona na inona fahasamihafana, mba hiarovana azy ireo amin'ny hatsiaka amin'ny toetr'andro mangatsiaka tsy misy orana.
Tokony hotsaroana fa ny rhododendrons na ny rirany dia mbola manohy mampihena ny fahamendrehana. Noho izany, hatramin'ny fararano dia ilaina ny manome azy ireo ny rano ilaina. Amin'izany, mandra-pahatonga ny ranomandry, ny zavamaniry dia be rano (farafahakeliny rano 10-12 litatra ho an'ny fotodrafitrasa isaky ny olon-dehibe), ary avy eo dia mametaka bozaka matevina. Taorian'ny fanombohan'ny voalavo voalohany dia tokony hampitombo ny haavon'ny antsantsa, manondrahana ny fakany sy ny sampana ambany amin'ny kompost, siramamy kesika na tavy kely.
Ahoana ny fomba handrakofana ny rhododendron amin'ny ririnina? Mazava ho azy fa ny fomba fiafenan'ny ririnina dia miankina amin'ny fanoherana mafana ataon'ny Rhododendron. Ho an'ny trano fialofana, afaka mampiasa rojom-paty maromaro miaraka amin'ny taratasy kraft, voajanahary (tongolo lapnika, ravina maina) na artifisialy (agrotex, spandbond, lutrasil) mandrakotra fitaovana. Hanampy amin'ny fiarovana ny mavomavo amin'ny alàlan'ny ranomandry sy ny famonoana mahazatra. Maro ny mpikarakara zaridaina manomana trano fialan-tsasatra amin'ny rhododendron ririnina, mandondona azy ireo avy amin'ny foitra polyurethane na polypropylène.
Ny rhododendrons mandringa dia tsy dia mitaky fotoana firy amin'ny ririnina, noho izany dia ampy hamatahana azy ireo amin'ny tany mba hahafahan'ny sampany rakotra ranomandry. Ny vozona fotsy dia tsy maintsy asiana siramamy na ravin-kazo maina miaraka amin'ny farafahakeliny farafahakeliny 15 cm.
Rehefa tapitra ny loza ateraky ny hatsiaka mahery dia tsy maintsy esorina ny toeram-pialofana. Ataovy izany rehefa tsy milentika ambany ny 10 ° C. Tsy dia mampihoron-koditra loatra ny ranomandry eny amin'ny rosewood, fa ny fialofana dia mety hitarika amin'ny fitomboan'ny orinasa. Mba hiarovana ny lambondriaka amin'ny solika, esory tsara kokoa ny trano fialofana ny toetr'andro, mamela ny ampahany aminy mandritra ny fotoana fohy, ho toy ny fiarovana fiarovana.
Koa satria ny rongony dia marefo dia tsy afaka manohitra ny fahasimban'ny lanezy. Noho izany, aorian'ny lomotra mavesatra dia tokony hohamaivanina kokoa ny ranomandry amin'ny rhododendron. Raha mihalehibe ao amin'ny faritra dacha ny rhododendron, izay tsy misy ny zaridaina amin'ny ririnina, dia tsara kokoa ny manamboatra ravaka manokana ho an'ny sampan'ny rhododendron, ary manamboatra lavaka rivotra.
Miaro amin'ny fomba tsotra, ny rhododendrons dia azo antoka fa ho tafavoaka na dia ny ririnina henjana aza, mba hahafaly ny mpamboly kanto indray ao anaty voninkazo maitso sy mamiratra amin'ny lohataona.
Nirongo ny valala - fiomanana amin'ny ririnina
Ahoana no mampitombo ny mainty hoditra?
Vao mitombo ny karaoty eny an-kalamanjana
Karazana karaoty ho an'ny fitehirizana ririnina
Fambolena trondro ambanin'ny sarimihetsika mainty
Ahoana no mampitombo ny kiwi?
Phalaenopsis - famoahana
Hybrides sy cherry hybrid
Latabatry ny sekoly ho an'ny tokantrano
Volana monja aorian'ny fiterahana amin'ny fampinonoana
Goosebumps amin'ny tongotra
Safidy ho an'ny ankizy 4 taona
Laurent Pie miaraka amin'ny holatra
Akorandriaka eny amin'ny sisiny roa
Trends amin'ny fanangonana volom-borona 2014
Nilaza i Ricky Martin fa nanafina ny tanjony nandritra ny fotoana lava izy ary nifankahalala tamin'ny vadiny
Tsara ny iray, fa tsara kokoa ny roa: kintana 20, miteraka kambana
Smoothies ao anaty blender ho an'ny fahavoan'ny fahavoazana
Ahoana no hambolena paraky - inona no ilainao hananana tsiron-karena?
Pita mofo pita ao anaty lafaoro
Sakafo ho an'ny shawarma ao an-trano
Sela mena miaraka amin'ny fitaovam-piadiana
Orana vita amin'ny tanimanga polymère